होली खेल्ने क्रममा बाग्लुङका दुई समुह बीच यसरी भएको थियो झ.डप,’ दुईको मृ’त्यु र अन्य १३ जना वेपत्ता ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
March 29, 2021 AdminLeaveaComment on होली खेल्ने क्रममा बाग्लुङका दुई समुह बीच यसरी भएको थियो झ.डप,’ दुईको मृ’त्यु र अन्य १३ जना वेपत्ता ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
होली पूर्णिमाका अवसरमा लागेको मेलामा दोहोरो झ.डपपछि दुई युवाको मृ’त्युका विषयमा अ.नुसन्धान गर्न प्रहरी प्रमुखको टोली घ’टनास्थलतर्फ लागेको छ । बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका–१० दर्लिङ बल्देधुरीमा भएको घ’टनाका विषयमा अ.नुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कृष्णबहादुर पल्ली मगरको टोली घ’टनास्थलतर्फ लागेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी नायब उपरीक्षक इकवाल हवारीका अनुसार घ’टना भएलगत्तै मगरको कमाण्डमा ११ जनाको टोली बुर्तिबाङ प्रस्थान गरेको हो । आइतबार दिउँसो दुई समूहबीच झ.डप हुँदा दुई जनाको मृ’त्यु भएको थियो । हिजो राति नै गलकोटबाट प्रहरी निरीक्षकको टोली घ’टनास्थल पुगेको थियो ।
झ.डपपछि निसीखोला गाउँपालिका–७ का ३६ वर्षीय प्रकाश कुँवर र सोही ठाउँका ३४ वर्षीय दीपक दमाईको मृ’त्यु भएको छ । मृ’तकको शव परीक्षणका लागि बुर्तिबाङ प्राथमिक स्वास्थ्यचौकीमा हिजो राति नै ल्याइएको हवारीले बताउनुभयो । उनीहरुको भिरबाट ५०० मिटर तल खसेको अवस्थामा श’व भेटिएको थियो ।
अन्य केही भएको भन्दै बेप’त्ताको खोजी भइरहेको छ । मृ’तक कुँवर नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सदस्य समेत हुनुहुन्थ्यो । स्थानीयवासीका अनुसार दिउँसो म.दिरा खाएर होली मनाउन जम्मा भएका युवाहरूको बीचमा भनाभन हुँदा झ.डप भएको थियो ।
यो साताको राशिफल हेर्नुहोस : चैत्र १५ गते आईतबारदेखी चैत्र २१ गते शनिबारसम्मको
आजको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७८ साल जेठ ०९ गते आईतबार तदनानुसार ईश्वी सन् २०२१ मे २३ तारिख
साप्ताहिक राशिफल हेर्नुहोस् : पौष ०५ गते आईतबारदेखी पौष ११ गते शनिबारसम्मको